गुलाफको अनेक रंग : प्रेमदेखि बिछोडसम्मको अर्थ - Lekbesi Khabar
हुन त गुलाफ एउटा फूलको प्रजाति हो । तर यस फूललाई प्रेमको प्रतिकका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । कुन रंगको गुलाफले के को प्रतिक झल्काउँछ त ? हेरौँ रंग अनुसारको गुलाफ फूलको जानकारी ।
१. रातो गुलाफ : प्रेम र क्षमताको प्रतिक
गुलाफी गुलाफ मुटुको धड्कनको प्रतिक हो । यदि तपाईंलाई कसैले गुलाबी गुलाफ दियो भने यसको अर्थ ती व्यक्तिका लागि तपाई मुटुको धड्कन बराबरको हुनुहुन्छ भन्ने जनाउँछ । यसका साथै गुलाबी रगंको गुलाफले सुन्दरता जनाउँछ । हल्का गुलाबी रगंको गुलाफले सहानुभुति र गाढा गुलाबी रगंको गुलाफले कृतज्ञता झल्काउछ ।
पहेँलो गुलाफ मित्रताको प्रतिक हो । यो गुलाफ विशेषत:मित्रता गाँस्न वा मित्रता बीच आएको फाटो कम गर्न दिइने गरिन्छ । पहेँलो गुलाफ जसलाई पनि दिन सकिन्छ । यसले प्रेम वा अरु कुनै नकारात्मक भाव झल्काउँदैन । यो स्वच्छ मित्रताको प्रतिक हो ।
४. सेतो गुलाफ : सत्य, शान्ति र साँचो प्रेमको प्रतिक
सेतो गुलाफ साचो प्रेम र स्वच्छ हृदयको प्रतिक हो । यसले कसैले गरेको चोखो र साँचो माया जनाउँछ । यसका साथै सेतो गुलाफ सत्य, शान्तिका रुपमा मानिन्छ । सेतो रंग आफैमा शुद्ध, सरलता र शान्तिको प्रतिक हो ।
कालो गुलाफ विदाई, बिछोड वा माया मरेको प्रतिक हो । यदि कसैले कालो रंगको गुलाफ दियो भने उसले तपार्इंलाई छाड्न चाहेको, माया मारेको वा तपार्इंबाट टाढा हुन खोजेको दर्शाउँछ । कालो रंग आफैमा नकारात्मक वा विरोधको रंगको रुपमा मानिन्छ ।
३ मंसिर २०७६, मंगलवार १३:०७ November 19, 2019
भगवान नै लुटिने डर, जनप्रतिनिधि नै मूर्ति चोर !